Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny fanarenana ny fitsangatsanganana an-habakabaka tamin'ny volana jona dia mbola diso fanantenana ihany
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fangatahana dia mijanona eo ambanin'ny ambaratonga mialoha ny COVID-19 noho ny fetra iraisam-pirenena.
Ny fitakiana totalin'ny dia an-habakabaka tamin'ny volana Jona 2021 (refesina amin'ny kilometatra mpandeha amin'ny fidiram-bola na RPK) dia nidina 60.1% raha oharina tamin'ny Jona 2019.
Ny fangatahan'ny mpandeha iraisam-pirenena tamin'ny volana Jona dia 80.9% ambanin'ny Jona 2019.
Ny fitakiana anatiny dia nidina 22.4% raha oharina amin'ny ambaratonga mialoha ny krizy (Jona 2019).
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) nanambara ny fahombiazan'ny fangatahan'ny mpandeha tamin'ny volana Jona 2021 izay mampiseho fanatsarana kely eo amin'ny tsena fitetezam-paritany iraisampirenena sy an-toerana. Ny fangatahana dia mijanona eo ambanin'ny ambaratonga mialoha ny COVID-19 noho ny fetra iraisam-pirenena.
Satria ny fampitahana eo anelanelan'ny 2021 sy 2020 ny valim-bolana isam-bolana dia voasivan'ny vokadratsin'ny COVID-19, raha tsy misy fanamarihana hafa, ny fampitahana rehetra dia hatramin'ny Jona 2019, izay narahina lamina fangatahana mahazatra.
Ny fitakiana totalin'ny dia an-habakabaka tamin'ny volana Jona 2021 (refesina amin'ny kilometatra mpandeha amin'ny fidiram-bola na ny RPK) dia nidina 60.1% raha oharina tamin'ny Jona 2019. Izany dia fanatsarana kely noho ny fihenan'ny 62.9% voarakitra tamin'ny Mey 2021 nifanohitra tamin'ny Mey 2019.
Ny fangatahan'ny mpandeha iraisampirenena tamin'ny volana Jona dia 80.9% ambanin'ny volana Jona 2019, fanatsarana ny fihenan'ny 85.4% voarakitra tamin'ny Mey 2021 raha roa taona lasa izay. Ny faritra rehetra ankoatra an'i Azia-Pasifika dia nandray anjara tamin'ny fangatahana somary avo kokoa.
Ny fitakiana an-trano tanteraka dia nidina 22.4% raha oharina amin'ny ambaratonga mialoha ny krizy (Jona 2019), fahazoana kely noho ny fihenan'ny 23.7% voarakitra tamin'ny Mey 2021 raha tamin'ny vanim-potoana 2019. Ny zava-bita manerana ny tsena anatiny dia nifangaro tamin'ny Russia nitatitra fanitarana matanjaka raha i China kosa niverina tany amin'ny faritany ratsy.
“Mahita ny fivezivezena amin'ny làlana tsara isika, indrindra amin'ny tsena anatiny sasany. Saingy ny toe-javatra misy ny dia iraisam-pirenena dia tsy lavitra ny toerana tokony hisy antsika. Ny volana jona no tokony ho fiandohan'ny vanim-potoana fara tampony, fa ny zotram-piaramanidina dia nitondra 20% fotsiny amin'ny haavon'ny 2019. Tsy fanarenana izany fa krizy mitohy ateraky ny tsy fandraisana andraikitra nataon'ny governemanta, ”hoy i Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.